कार्ल मार्क्स आफैं कति मार्क्सवादी थिए ?
जर्मनीको पश्चिममा मोजल नदी बग्छ। त्यही नदीको किनारमा ट्रियर नामको सुरम्य नगर छ। त्यहाँको जनसंख्या एक लाखभन्दा केही बढी छ। यो सहर कार्ल मार्क्ससँग नजोडिएको भए जर्मनीबाहिर कमैले मात्र यसकाे नाम थाहा पाउँथे।
उन्नाइसौं-बीसौं शताब्दीमा कार्ल मार्क्सको नामको चर्चा यति धेरै थियो कि बुद्धिजीवीको एउटा वर्ग विशेषले उनलाई पूजनीय देवता ठान्थ्यो र ट्रियरलाई पवित्र तीर्थस्थल। जर्मनी मात्र हैन, भारतजस्ता केही देशमा अहिले पनि मार्क्सका भक्त प्रशस्त छन्। उनीहरु मार्क्स नामको माला जप्छन्। तस्बिरमा फूलमाला चढाउँछन्।
५ मे १८१८ मा ट्रियरमा जन्मिएका कार्ल मार्क्सको प्रसिद्ध पुस्तक दास क्यापिटलको पहिलो भाग प्रकाशन भएको अहिले १५२ वर्ष भयो। यसबीचमा चीन (जो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ तर कार्ल मार्क्सको मार्क्सवादबाट विमुख भइसकेको छ) ले ट्रियर सहरमा ६ मिटर अग्लो मार्क्सको सालिक ठड्याउने प्रस्ताव राखेको थियो।
यो प्रस्तावपछि ट्रियर सहर बडो दुविधामा पर्‍यो, कारण त्यहाँका मानिस अहिले मार्क्सप्रति गर्व होइन लज्जाको महसुस गर्छन्। ट्रियरले चीनलाई अपमान गर्न चाहेन र सालिक ठड्याउने प्रस्ताव स्वीकार गर्‍यो।
कार्ल मार्क्सको जन्म मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको थियो। त्यतिबेला ट्रियर पर्सियन राज्यको अधीनस्त थियो। उनका पिता हेनरिक पेसाले कानुन व्यवसायी थिए र अंगुर बगानका मालिक थिए। यहुदीहरुले पर्सियाप्रति भेदभावपूर्ण कानुन लगाएका कारण कार्ल मार्क्स जन्मनुभन्दा केही पहिले नै हेनरिक धर्म परिवर्तन गरी इसाई धर्मको प्रोटेस्टेन्ट समुदायमा लागेका थिए।
धर्म परिवर्तनभन्दा अगाडि पिताको नाम हर्सेल मार्क्स थियो। हेनरिक छोरोलाई पनि आफूजस्तै वकिल बनाउन चाहन्थे। तर स्कुलको पढाइसकेपछि कार्ल मार्क्सले बोन विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र र साहित्य लिएर पढ्न थाले। उनी दर्शनशास्त्रमा एकोहोहिँदै गए।
मार्क्सको उत्तरार्ध सुखद रहेन
दर्शनशास्त्र अध्ययन गरेर आफ्नो बौद्धिक जीवन यात्रालाई उचाइमा पुर्‍याएका कार्ल मार्क्स ६५ वर्षको उमेरमा १४ मार्च १८८३ मा संसारबाट बिदा भए। त्यतिबेलासम्म उनको नाम दार्शनिकभन्दा बढी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार र समाजावादी क्रान्तिका प्रचारका रुपमा विश्वभर प्रख्यात भइसकेको थियो।
अर्थतन्त्र, समाज र राजनीतिबारे उनको सैद्धान्तिक मान्यतालाई मार्क्सवाद भन्न थालियो। क्रान्तिकारी विचारका कारण युरोपेली मुलुकहरुले उनका मान्यतालाई अनुशरण गरे। पेरिस र ब्रसेल्समा ५ वर्ष बिताएपछि १८५० देखि उनी लन्डनमा रहन थालेका थिए।
यहाँसम्म कि उनीसँग कुनै देशको नागरिकता पनि थिएन। मृत्यु भएपछि केही साथीहरुले उनको शवलाई लन्डनको एउटा चिहानमा समाधिस्थ गरे। उनको मृत्युपछि अनन्य मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले दास क्यापिटलका बाँकी भागको पाण्डुलिपि सम्पादन र प्रकाशन गरे।
१८८१ मा पत्नी जेनीको मृत्युपछि कार्ल मार्क्सको जीवनको अन्तिम १५ महिना एक्लै बित्यो। यहाँसम्म कि उनीसँग कुनै देशको नागरिकता पनि थिएन। मृत्यु भएपछि केही साथीहरुले उनको शवलाई लन्डनको एउटा चिहानमा समाधिस्थ गरे। उनको मृत्युपछि अनन्य मित्र फ्रेडरिक एंगेल्सले दास क्यापिटलका बाँकी भागको पाण्डुलिपि सम्पादन र प्रकाशन गरे।
एंगेल्स पनि मूलतः पर्सियाका नागरिक थिए। उनी राइन नदी नजिकैको बारमेनमा १८२० नोभेम्बर २८ मा जन्मिएका थिए। उनका पिता सुती कपडा मिलका मालिक थिए। एंगेल्स पनि मार्क्सजस्तै दर्शनशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार र साम्यवादी क्रान्तिकारी भनेर चिनिन्छन्।
उनीहरुको परिचय एउटा पत्रिकाको कार्यालयमा सन् १८४२ नोभेम्बरमा भएको थियो। एउटै विचार र सोचाइ भएको साथी पाउँदा दुवै हर्षित थिए। केही समयपछि उनीहरुको मित्रता निकै गाढा बन्यो। पत्रमित्रता गर्न थाले। यो क्रम बाक्लिँदै गयो। १८७० मा एंगेल्स पनि लन्डनमा बसाइँ सरे। उनको निधन लन्डनमै सन् १८९५ को अगस्ट ५ मा भयो।
वर्ग संघर्ष वा वर्गचेतना
मार्क्सको मार्क्सवादमा एंगेल्सको पनि ठूलो वैचारिक योगदान छ। मार्क्सवादको मूल कथ्य मानव समाज वर्गसंघर्षले निर्माण भएको छ र वर्गसंघर्षले सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो। यस्तो संघर्ष बुर्जुवा भनिने सत्ताधारी वर्ग र सर्वहारा भनिने मजदुर वर्गबीच हुन्छ।
उनी भन्थे, यसपछि श्रमिकमा नयाँ खालको वर्ग चेतना विकास हुन्छ। त्यसपछि वर्गहीन साम्यवादी (कम्युनिस्ट) समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले क्रान्ति हुन्छ। अनि सर्वहारा वर्गले राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ।
राज्यसत्ता र कारखानाजस्ता उत्पादनका साधनमाथि पुँजीपतिको वर्चस्व हुन्छ। मजदुरले श्रम लगानी गरेर वस्तु उत्पादन गर्छन्। मार्क्सले के भविष्यवाणी गरे भने प्राचीनकालको सामाजिक आर्थिक प्रणालीजस्तै गरी पुँजीवादमा यस्तो अन्तरविरोध देखापर्छ र एक दिन त्यसको अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि समाजवाद नामको एउटा नयाँ सामाजिक प्रणाली स्थापना हुन्छ।
मार्क्सको मान्यता थियो पुँजीवादले सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न गराउँछ। त्यसपछि बुर्जुवा र सर्वहारा वर्गबीच दुश्मनी बढ्न थाल्छ। उनी भन्थे, यसपछि श्रमिकमा नयाँ खालको वर्ग चेतना विकास हुन्छ। त्यसपछि वर्गहीन साम्यवादी (कम्युनिस्ट) समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले क्रान्ति हुन्छ। अनि सर्वहारा वर्गले राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ।
मार्क्स आफ्नो यस्तो सपना साकार भएको हेर्न निकै उत्सुक थिए। उनी सामाजिक एवम् आर्थिक मुक्तिका लागि मजदुरलाई एकजुट बनाउन चाहन्थे। उनीहरुको बलद्वारा नै पुँजीवादीको सत्ता कब्जा गर्न चाहन्थे।
मार्क्सको दुश्प्रचार गरियो
मार्क्सले आफ्नो जीवन सर्वहारा वर्गले सत्ता कब्जा गरको देख्न पाएनन्। रुसमा १९१७ मा भएको तथाकथित अक्टुबर क्रान्ति तत्कालीन जार शाहीको पतन गराउन मजदुर किसान र सैनिक मिलेर गरिएको थियो।
स्टालिनले एक्लै तीन दशकसम्म शासन गरे। उनले आफ्नो शासनकालमा एक करोड २० लाख जनतालाई साइबेरियाको श्रम शिविरमा लगेर यातना दिए। तीमध्ये २० लाख जनता कहिल्यै फर्केर आएनन्।
सोभियत संघकालीन कम्युनिस्टहरुले त्यहाँ मार्क्सको खुबै दुश्प्रचार गरे। किनकि त्यो क्रान्तिमा मार्क्सको विचार घुसाइएको थिएन। साथै त्यो जनवादी क्रान्ति पनि थिएन। क्रान्तिपछि जारकालीन दमनकारी तानाशाहीको स्थान कम्युनिस्ट नेताले लिए। एकतन्त्रीय शासन लागू गरे।
स्टालिनले एक्लै तीन दशकसम्म शासन गरे। उनले आफ्नो शासनकालमा एक करोड २० लाख जनतालाई साइबेरियाको श्रम शिविरमा लगेर यातना दिए। तीमध्ये २० लाख जनता कहिल्यै फर्केर आएनन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुसको सर्वहारा सत्ता र रुसकै आधिपत्यमा रहेका पूर्वी युरोपेली मुलुकका सर्वहारा नराम्ररी पराजित भए।
यस्तो नहुँदो हो त आफ्ना नागरिक देशबाट पलायन नहोऊन् भनेर रोक्नका लागि साम्यवादी पूर्वी जर्मनीले निर्माण गरेको बर्लिनको पर्खाल रुसी क्रान्तिको ७२ वर्षपछि १९८९ मा जनताकै प्रदर्शनद्वारा भत्कने थिएन। साथै सोभियत संघसहित पूर्वी युरोपबाट धमाधम कम्युनिस्ट शासनको पतन हुने थिएन।
मार्क्स र एंगेल्सपछि मार्क्सवाद चाहे जतिसुकै तार्किक लागे पनि पुँजीवादमा अन्तर्निहित विरोधाभाष जस्तै न त मार्क्सवाद न त यसका प्रणेताको जीवन विरोधाभासमुक्त छैन। दुवैजना सर्वहारा वर्गको मुक्तिको कुरा त गर्छन् तर उनीहरु आफैंले श्रम र मजदुरी कहिल्यै देखेनन्। दुवैको जन्म सुखी र खुसी परिवारमा भएको थियो। दुवैले उच्च शिक्षा आर्जन गरेका थिए। दुवै बुद्धिजीवी थिए, श्रमजीवी थिएनन्।
यी दुई बीच आदानप्रदान भएका केही पत्रले के पुष्टि गर्छन् भने मजदुर, विदेशी, आफ्ना घरपरिवारका सदस्यप्रति उनीहरुको विचार निकै पूर्वाग्रही, अनुदार र तुच्छ थियो।
के छन् मार्क्सका पत्रमा?
जर्मनीका ब्योर्न र सिमोन अक्स्तिनात दाजुभाइले हालै मार्क्स र एंगेल्जबीच आदानप्रदान भएको पत्रलाई गोजी पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गरेका छन्। पुस्तकको नाम हो, मार्क्स र एंगेल्सबीचको अन्तरंग। सिमोनले एक दिन मार्क्सको एउटा पत्र भेटेछन्।
आफ्ना कैयौं चिठीमा मार्क्सले मजदुरको अपमान गरेका छन्। किसानलाई पनि बाँकी राखेका छैनन्। मजदुरलाई मुक्ति दिलाउन उनले लामा लामा कुरा लेखेका छन् तर उनी मजदुर र श्रमिकलाई पटकक्कै मन पराउँदैनथे।'
पत्रमा रहेका केही भनाइ निकै तुच्छ लागेपछि उनीहरुलाई थप जिज्ञासा भएछ। अनि उनीहरु यस्ता अरु पनि पत्रको खोजीमा जुटेछन्। खोज्दै जाँदा उनीहरुले धेरै भनाइहरु फेला पारे र यसलाई पुस्तकाकार रुप दिन उचित ठाने। दास क्यापिटल प्रकाशन भएको डेढ सय वर्ष र मार्क्स जन्मिएको दुई वर्षका अवसरमा प्रकाशित पुस्तकमा मार्क्स र एंगेल्सबारे यस्ता अविश्वसनीय चित्र प्रस्तुत गरिएका छन्, ती पढ्दा उनीहरुका प्रशंसक आश्चर्यचकित हुनेछन्।
जर्मन मिडियासँग कुरा गर्दै ब्योर्न अक्स्तिनातले भनेका छन्, 'सबजना मान्छन् मार्क्स सर्वहारा वर्गको मुक्तिदाता थिए। पुँजीपति, कुलीन र सामन्तसँग लड्न उनी सहयोग गर्थे। तर उनको जीवनको नजिक पुगेर अध्ययन गर्दा के पायौं भने उनी मजदुर र श्रमिकलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्थे तर श्रमिकलाई महामूर्ख भन्थे।'
ब्योर्नले भने, 'आफ्ना कैयौं चिठीमा मार्क्सले मजदुरको अपमान गरेका छन्। किसानलाई पनि बाँकी राखेका छैनन्। मजदुरलाई मुक्ति दिलाउन उनले लामा लामा कुरा लेखेका छन् तर उनी मजदुर र श्रमिकलाई पटकक्कै मन पराउँदैनथे।'
मार्क्सवादी कि तानाशाही?
अक्स्तिनात दाजुभाइका अनुसार सत्तामा नपुगुन्जेल मार्क्सवादबाट प्रभावित वामपन्थीहरु शोषित, दलित र कमजोरका पक्षमा सामन्तवादी र एकाधिकारवादीसँग लड्छौं भन्छन्। तर जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन् तब आफैं तानाशाही बन्न पुग्छन्। सत्ता छोड्नै चाहँदैनन्।
उनका अनुसार मार्क्सका एक साथीले एउटा पत्रमा मार्क्सलाई जर्मनीका भावी तानाशाह भनेका थिए। ती साथीले मार्क्स आफ्नो जीवनकालमा प्रभावशाली बनेका थिए भने तानाशाही बन्ने निश्चित थियो भनेका छन्। मार्क्स राजनीतिमा लागेर चुनाव जितेका थिए भने उनी जनतामैत्री वा सद्भावपूर्ण नेता बन्न सक्दैनथे भन्ने उनको निष्कर्ष छ।
अक्सितनात दाजुभाइले भनेका छन्, 'उनीहरु दुवैको जीवन सम्पन्न थियो। उनीहरु अरुको जीवनशैलीको निन्दा गर्थे। अर्काको पैसामा परजीवीजसरी बाँच्थे। उनीहरुको जीवन यति खर्चिलो र भड्किलो थियो कि यसको कुनै दृष्टान्त नै छैन।'
अक्स्तिनात दाजुभाइका अनुसार मार्क्सले लेखेका पत्रमा पैसाको भूमिका प्रमुख रुपमा उठाइएको छ। पत्र पढ्दा मार्क्सको जीवनशैली निकै ठाँटबाँटपूर्ण थियो। उनी जहाँ जान्थे, त्यहाँ कसरी पैसा उठाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहन्थे।
गरिबको सहयोगका लागि के गर्न सकिन्छ? श्रमिकलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ? उनीहरुको मुहारमा कसरी खुसी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनका कुनै पत्रमा पनि केही उल्लेख छैन। यो कुरा उनले आफ्ना परम् मित्र एंगेल्ससँग पनि भनेका थिए। त्यसो त मार्क्सका पिता चर्चित वकिल थिए। एंगेल्सका पिता उद्योगपति थिए।
मार्क्स र एंगेल्सको पूजा हुन्थ्यो
पूर्वी युरोपका देशमा मार्क्स र एंगेल्सका निजी कमजोरीको ढाकछोप मात्र गरिएन उनीहरुलाई भगवानकाे जसरी पूजाआराधना गरिन्थ्यो। उनीहरुको कुनै दोष देखाउनु इस्लाममा ईश्वरलाई निन्दा गर्नजस्तै बर्जित थियो।
यति मात्र होइन, रुसका लेनिन र स्टालिन, रोमानियाका चाउसेस्कु र चेकोस्लोभाकियाका हुसा जस्ता कम्युनिस्ट नेताको पनि देवताजसरी पूजा गरिन्थ्यो। जो नेता एकपटक देशको सर्वोच्च नेता बन्थे उनलाई हटाउन यमराज नै चाहिन्थ्यो। तर अहिले संसार बदलिएको छ।
चीन र भियतनामले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था अपनाइसकेका छन्। उत्तर कोरियामा किम वंशको राजशाही चलिरहेको छ। क्युबामा पनि बिस्तारै पुँजीवादी व्यवस्था लागू हुँदै छ।
संसारका चार मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन छ। तिनमा चीन र भियतनामले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था अपनाइसकेका छन्। उत्तर कोरियामा किम वंशको राजशाही चलिरहेको छ। क्युबामा पनि बिस्तारै पुँजीवादी व्यवस्था लागू हुँदै छ।
यसरी संसारको परिवर्तनको परीक्षामा मार्क्सवाद कहीँ पनि उत्तीर्ण भएको छैन। तर पनि कैयन् नेताहरु आफूलाई वामपन्थी या प्रगतिशील बताइरहेका छन्। उनीहरु मार्क्सवादको मोहलाई छाड्न सकेका छैनन्।
कम्युनिस्ट सरकार वा संसारभरका मार्क्सवादीको सबैभन्दा प्रिय नारा हो, संसारभरका सर्वहारा एक होऔं। सबैले मान्छन्, यो नारा कार्ल मार्क्सको देन हो। तर अक्स्तिनात बन्धुका अनुसार यो नारा कार्ल मार्क्सले होइन, कार्ल साप नामक मार्क्सका समकालीन जर्मन मजदुर नेताले दिएका हुन्।
सापरले पनि पर्सिया छाडेका थिए। स्विट्जरल्यान्ड र फ्रान्समा केही समय बिताएपछि सापर १८४० मा लन्डनमा बसाइँ सरेका थिए। त्यहाँ उनको कार्ल मार्क्स र एंगेल्ससँग परिचय भएको थियो। त्यतिबेला लन्डन पर्सियाबाट भागेकाहरुको अखडा नै थियो।
पूर्वी युरोपका भूतपूर्व कम्युनिस्ट सरकार र संसारका केही मार्क्सवादीले आफ्नो हितमा कार्ल मार्क्स र एंगेल्सलाई मुक्तिदाताका रुपमा देवत्वकरण गरे। उनीहरुले संसारमा दुवै व्यक्तिका उज्याला पक्षलाई मात्र प्रस्तुत गरे। नराम्रा पक्ष जति सबै लुकाइदिए।
अक्स्तिनात दाजुभाइले यसको पुष्टि गर्न सोभियतकालीन रुसका एक शोधकर्तालाई उदाहरण दिएका छन्। उनले मार्क्स र एंगेल्सका यस्ता भनाइहरु एकत्रित गरेर राखेका थिए। तर उनलाई स्टालिनले गोली हानेर मारिदिएका थिए।
जनसाधारणलाई यो भ्रम छ कि मार्क्स र एंगेल्स सर्वहाराका मुक्तिदाता नै हुन्, उनी राष्ट्रवादभन्दा माथि थिए। राष्ट्रबीच भाइचारा वा समानता कायम गर्न चाहन्थे।
यही कारण मार्क्स र एंगेल्सका सबै भनाइ, नोटबुक र पत्र एकै ठाउँमा प्राप्त हुन सक्दैन। अलगअलग देशका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा उपलब्ध छन्। केही त कहीं पनि पाइँदैन, ती देशका सरकारले नै नष्ट गरिदिएका छन्।
मार्क्स र एंगेल्सको अन्तरंगमा प्रकाशित सामग्रीका संग्रहकर्ता अक्स्तिनात दाजुभाइको गुनासो छ, यी दुई ऐतिहासिक पुरुषँसग सम्बन्धित सामग्री जुटाउन प्रयास भएकै छैन। पुस्तकलाई आधार मानेर उनीहरुको परिचय स्थापित गरियो।
त्यसैले जनसाधारणलाई यो भ्रम छ कि मार्क्स र एंगेल्स सर्वहाराका मुक्तिदाता नै हुन्, उनी राष्ट्रवादभन्दा माथि थिए। राष्ट्रबीच भाइचार वा समानता कायम गर्न चाहन्थे। तर साँचो के हाे भने उनी अन्य मुलुकको धज्जी उडाउँथे। उनको जर्मन राष्ट्रवाद अन्य राष्ट्रवादजस्तै थियो। उनको साम्यवाद जुन देशले अपनाए, ती देशमा नागरिक स्वतन्त्रतको ठूलो मूल्यको सट्टा केही भौतिक वस्तुको उपलब्धताभन्दा अगाडि बढेको छैन।
मार्क्स र एंगेल्स अन्तरंग पुस्तकमा मार्क्सका केही उद्धरण
-मलाई थाहा छ, म कुनै मार्क्सवादी होइन (आफ्नै बारेमा मार्क्स)
-फ्रान्सेलीहरुलाई मार्नुपर्छ । (जर्मन र फ्रान्सबीचको युद्धको समयमा)
-इस्लाम मुसलमान र नास्तिकबीच शत्रुताको स्थिति पैदा भइरहेको छ।
-मजदुरजस्ता गधा अरु कोही हुन सक्दैनन्।
(सत्याग्रहमा प्रकाशित राम यादवको यो लेख अनुवाद गरिएको हो)